Iibhendi zentshukumo zokuLungisa abavelisi kunye nababoneleli - iTshayina yeVibration Dampers Factory
Iidampers zokungcangcazela zisetyenziselwa ukufunxa ukungcangcazela kwe-aeolian yomqhubi wemigca yokuhambisa, kunye nocingo lomhlaba, i-OPGW kunye ne-ADSS. Ukungcangcazeliswa ngumoya kweziqhubi zomoya kuxhaphakile kwihlabathi liphela kwaye kunokubangela ukudinwa kwabaqhubi kufutshane nesincamathiselo sehardware. Iya kunciphisa ubomi benkonzo ye-ADSS okanye yeentambo ze-OPGW.
Izidampuli zentshukumo zisetyenziswa ngokubanzi ukulawula ukungcangcazela kwe-aeolian yentambo ye-ADSS kunye neengcingo zomhlaba kubandakanya iintambo zomhlaba ezibonakalayo (OPGW). Xa i-damper ibekwe kwi-conductor eqhubayo, intshukumo yamatye iya kuvelisa ukugoba kwe-strand yentsimbi. Ukugoba komtya kubangela ukuba iintambo ezizodwa zomtya zidibane kunye, ngaloo ndlela kupheliswe amandla.
Zimbini iintlobo zodamper lokungcangcazela oluqhelekileyo kuluhlu lweemveliso zejera
1) Ukungcangcazela komoya okuhambisa umoya
2) isitampu sokungcangcazela seStockbridge
I-Spiral Vibration Dampers yenziwe ngeplastikhi enganyangekiyo yemozulu, engonakalisiyo, ii-dampers zinecandelo elikhulu, elenziwe ngobunkunkqele elenzelwe intambo, kwaye istampbridge vibration damper senziwe ngentsimbi engenasici, ialuminiyam kunye nesinyithi izixhobo. Uhlobo lwe-vibration damper luya kukhethwa ngokungqinelana nesithuba esithile kunye neemfuno zomqhubi.
Umgca weJera unikezela onke amalungu edibaniso kunye nezinye izinto ezisetyenziswa ngexesha lokwakha uthungelwano lwe-FTTX, ezinje ngeebakaki zepali, imitya yentsimbi engenanto, amagwegwe, amakhamandela, ukugcinwa kwentambo kunye nokunye.
Nceda uzive ukhululekile ukunxibelelana nathi ukuze ufumane iinkcukacha ezithe kratya malunga nale dampers yentshukumo.